Semalt: Torohevitra momba ny Botnet Botnet. Inona no tokony hijanonana ho azo antoka?
Ny rootkit dia sombin-rindrambaiko izay nafenina sy napetraka tao amin'ny ordinatera na fitaovana finday nefa tsy fantatrao. Mety hampiditra programa sy rakitra marobe izy ary alamina avy amin'ireo mpanafika. Manararaotra ny fahalemen'ny solosainao izy ireo ary mandresy lahatra anao hamoaka programa sy fitaovana hafahafa.
7) Artem Abgarian, manam-pahaizana ambony avy amin'ny Semalt , manamafy fa tsy mampidi-doza foana ny rootkits fa mety hanafina ireo hetsika ratsy rehetra, ka tokony hanaisotra azy ireo haingana araka izay tratra. Indraindray ireo mpanafika dia miditra amin'ny fampahalalam-baovao saro-pady ary mangalatra ny antsipiriany amin'ny karatra amin'ny fanampiana ny rootkits. Manara-maso tsy tapaka ny fihetsiky ny mpampiasa izy ireo, manao asa mahatsiravina ary manova ny fandaharanao raha tsy misy mahita azy.
Etsy andaniny, ny botnets dia tambajotra goavana amin'ny solosaina orinasa atosiky ny serasera. Manangana tamba-jotra lehibe sy kely izy ireo ary manao asa isan-karazany. Ao anatin'ny tontolon'ny botnet, ireo botsika dia antsoina amin'ny ordinatera sy ny fitaovana finday izay tsy afaka manatanteraka ny asany araka ny tokony ho izy ary voafehin'ireo hackers. Ny mpanafika dia manara-maso ny fitaovana ampiasainao amin'ny famindrana azy amin'ny virus, code maloto na malware izay manenjika ny masinao amin'ny fotoana fohy. Vetivety dia lasa ampahany amin'ny tambajotra botnet ny ordinatera ary tsy miasa araka ny tokony ho izy. Ny botnets dia matetika ampiasaina amin'ny fitantanana ireo karazana hetsika maloto, fizarana viriosy sy spam, ary manaparitaka fitaovana vaovao maro.
Nahoana no misy fandrahonana manan-danja ny rootkits sy botnets?
Ny olana voalohany amin'ny botnets sy ny rootkits dia ny hoe mijanona miafina izy ireo ary manatanteraka ny andraikiny mangina. Na dia tsy miafina foana aza ny botnets dia tsy miseho ao amin'ny rafitry ny ordinateranao ny rootkits..Indraindray, ireo rootkits sy botnets dia mbola tsy voamarina mandrapahatonga na raha tsy simba tanteraka ny fitaovana. Manao asa mangina izy ireo ary manamboatra programa hafa ratsy amin'ny fitaovanao. Raha sarotra ny mahita azy ireo, dia afaka mampiasa ny botnets sy ny rootkits mora kokoa ireo mpanafika mba hanovana sy hahazoana ny fampahafantarana manokana. Manafika ordinatera be dia be izy ireo ary manao heloka bevava maro miaraka amin'ireto botsika ireto, izay miafina ao amin'ny ordinatera sy fitaovana finday. Miaraka amin'ny solosaina bitika vitsivitsy, ireo mpanafika dia afaka mampitombo mora foana ny sazin'ny heloka sy ny fiantraikany eo amin'ny fikambanana madinika sy lehibe.
Inona no azontsika atao mba hiarovana ny tenantsika?
Raha mitady fikarakarana azo antoka ianao dia afaka manaraka ireto dingana ireto ary hampihena ny loza ateraky ny ordinateranao izay tratran'ny aretina.
1. Mandrindra sy mampiasa programa antivirus:
Ny programa antivirus na ny rindrambaiko dia tsy maintsy, ary tokony hametraka azy ireo haingana araka izay azo atao. Manampy izy ireo hamantatra sy hiaro ny solosainao na ny fitaovana findainao amin'ny viriosy malaza sy malware. Azonao atao ny mamantatra mora foana ny malware sy ny viriosy ary afaka manakana azy ireo tsy hiteraka olana lehibe ho anao. Satria manoratra mandrakariva ny code virtoaly vaovao ireo mpanafika, ilaina ny mitazona ny famaritana sy ny programa Antivirus vaovao. Tokony hampidirinao koa ny programa fanoherana ny rootkit sy ny bot amin'ny appleto.
2. Hametraka ny kitapo
Tsy maintsy mametraka ny rindrina izay manampy anao hisorohana ny karazana aretina maro ary manakana ny fifamoivoizana maloto alohan'ny hanimbana ny ordinateranao. Mametra ny fifamoivoizana izy ary afaka manatanteraka ny asany amin'ny rafitra rehetra miasa. Ataovy azo antoka fa mitazona tsy tapaka ny kitapo firewall
3. Ampiasao ireo tenimiafina matanjaka
Tokony hifidy tenimiafina mahery ianao mba tsy hahalalan'ireo mpanafika azy ireo amin'ny laoniny. Mampiasà teny samihafa ary mampifandray ny isa sy ny alfabeta rehefa mamorona tenimiafina. Tokony hanova matetika ny tenimiafina ianao mba hiantohana ny fiarovana anao amin'ny aterineto Source .